Yaa iska leh Webiga Nile – muxuuse muhiim u yahay? | Xaysimo
Home War Yaa iska leh Webiga Nile – muxuuse muhiim u yahay?
Balse Masar ayaa soo jeedisay in xilli dheer ay qaadato buuxinta biyo-xireenka – si aysan hoos ugu dhicin biyaha webiga, gaar ahaanna marka ay socoto wejiga hore ee buuxinta.
Wadahadallo u dhaxeeya Masar, Suudaan iyo Itoobiya oo ku saabsan biyo-xireenka ayaa miro-dhali waayay in ka badan afar sano – Mareykanka ayaase haatan isku dayaya inuu dhexdhexaadiyo.
Wasiirka biyaha ee Itoobiya ayaa sheegay in buuxinta biyaha ay billaabayaan bisha July
“Uma maleynayo markii ay Masaaridu halkan yimaadeen inay u yimaadeen in heshiis la gaaro,” Mr Seleshi ayaa sidaasi u sheegay BBC-da.
“Waxay haddana la yimaadeen qorshe cusub oo buuxinta biyo-xireenka ah. Waqtiga ay doonayaan inay qaadato buuxinta biyo-xireenka waa 12 ilaa 21 sano.
“Tani maaha mid la aqbali karo,” ayuu yiri.
Biyaha wabiyaha Nile ayaa ka soo burqada magaalada Masar ku taalla ee Aswan oo qiyaastii 920km (570 miles) dhinaca koonfureed ka xigta caasimadda Qaahira
Mr Seleshi ayaa BBC-da u sheegay in Masaarida uu u sharraxay inay “adag tahay in la isku xiriiriyo labo biyo-xireen”.
Itoobiya ayaa sidoo kale biyo-xireenka u aragta arrin iyada u taalla oo aysan mas’uuliyaddeeda iyo go’aankeedaba cid kale khuseynin.
Itoobiya ayaa rajeyneysa in biyo-xireenka la dhammeystiro sanadka 2020
Dalka Sudan waxaa faa`iido kale u ah in biyo-xireenka uu maamuli doono hab u socodka biyaha webiga – taas oo micnaheeda yahay in sanad walba ay sidii uun ahaan doonto.
Donald Trump ayaa rajeynaya in Mareykanku uu dallaal ka noqon karo heshiiska labada dal ee uu xulafada la yahay